မဟုတ်ပါ။ iPhone ဟောင်းသည် iOS 11 နှင့်နှေးသည်မဟုတ်ပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
မဟုတ်ပါ၊ iPhone ဟောင်းများ iOS 11 တွင်နှေးကွေးခြင်းမရှိပါ
iOS ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်ပျက်လာသည်။ update လုပ်သောသုံးစွဲသူများသည် crashes၊ နှေးနှေးခြင်းနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းမည်မျှကြာသည်ကိုတိုင်ကြားသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ iPhone များကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းဟောင်းများကိုမည်သို့ချန်လှပ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်များပြားလာသည်အချို့ကမူ၎င်းတို့၏ iPhone များသည်ပြfineနာမရှိဘဲကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
အကြောင်းပြချက်ကဘယ်သူလဲ။ လူတွေ iPhone ကိုပြောင်းဖို့အတင်းဖိအားပေးတာကို Apple ကသူ့ရဲ့ iPhone ဟောင်းတွေကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေပိုဆိုးအောင်လုပ်ပေးတာလား။ ခေတ်နောက်ကျရန်စီစဉ်ထားပါသလား? Futuremark မှထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရနောက်ဆုံးသတင်းများသည် iPhone ကိုပုံမှန်လည်ပတ်နေစေရန်နှင့်လများအတွင်းပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများကိုသက်သေပြရန်ဤအရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်သည်။
Futuremark တွင် ApplicationMM တစ်ခုရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်သော 3DMark ဟုခေါ်သည်။ စမ်းသပ်မှုများကို GPU (graphic) နှင့် CPU (processor) အဆင့်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ၅ လမှ ၇ အတွင်း iPhone အမျိုးမျိုးအတွက်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောသုံးစွဲသူများထံမှလပေါင်းများစွာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနေကြသည်။ အားလုံးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဂရပ်များ၌ထင်ဟပ်စေပြီးစမ်းသပ်မှုများမှရရှိသောပျမ်းမျှရမှတ်ကိုတစ်လနှင့်တစ်လတွေ့နိုင်သည်: မီးခိုးရောင် iOS9၏ရလဒ်၊ အပြာရောင် iOS 10 နှင့်လိမ္မော်ရောင် iOS 11. ရလဒ်များသည်မီးခိုးရောင်တွင် - iOS5ကိုရရှိခဲ့သည့်ရှေးအကျဆုံး iPhone 11s တွင်တွေ့နိုင်သည်အတိုင်းအတာသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ iOS 11 ထက်စာရင် graphical ထက်သာလွန်တဲ့အရာကိုတောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။
iPhone 66 မှာဆိုရင် iOS 11 နဲ့ iOS9တို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင် iOS 10 မှာဂရပ်ဖစ်တိုးတက်မှုဟာထင်ရှားပါတယ်။ iOS 11 မှာ CPU စမ်းသပ်မှုများသည် iOS9ထက်ပိုဆိုးသော်လည်းနောက်ဆုံးဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မပြောင်းလဲချေ iOS 10
iPhone 6s များတွင်မူအနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုများရှိသော်လည်း iOS 10 သည် GPU နှင့် CPU နှစ်ခုလုံးအတွက်ကန ဦး တိုးတက်မှုဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားပြီး iOS 11 ပေါ်ပေါက်လာမှုနှင့်အတူအဆင့်မှာမပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည်။
နောက်ဆုံး၌ iPhone7သည်နောက်ဆုံးပေါ် iOS 10 ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေခဲ့ပြီး CPU သည်ထိုမူကွဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြောင်းလဲမှုမရှိသလောက်ပင်။။ ဆိုပါစို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရည်မှန်းချက်နှင့်အရေအတွက် data တွေကိုရင်ဆိုင်နေရသည်ထိုအခါတစ်ခုချင်းစီ၏ထင်မြင်ချက်များသည်ဤဂရပ်များကိုကြည့်သောအခါမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » မဟုတ်ပါ၊ iPhone ဟောင်းများ iOS 11 တွင်နှေးကွေးခြင်းမရှိပါ
စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားမထားပါဘူးဒါပေမယ့်လျှော့ချရှိပါတယ်။ iOS 11 သည် hardware အသစ်များတွင်ပိုမိုအသုံးပြုသောအချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအမှန်အကန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုထက်ပိုသော updates များကိုရှိသည့်အခါဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါတို့တန်ဖိုးထားသင့်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ အခု iPhone6မှာ ၁၁.၀.၂ နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က iPhone 11.0.2 or7ကိုသွားပြီးတော့အမှိုက်ပုံးလို့ထင်တယ်။
ဒါကြောင့် iPhone4က iOS7ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
Apple forum မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပြောပြီး iPhone6ကိုပြောတာကနှေးကွေးနေတာ၊ မိုက်ကရိုဖုန်းအေးခဲခြင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာဖို့တစ်နှစ်ယူရမယ့်ကီးဘုတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းတွက်ချက်နိုင်သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နားလည်မှုလွဲခြင်းမရှိပါက CPU နှင့် GPU စမ်းသပ်မှုများသည် iPhone ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဘက်ထရီနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တွင် ios6နှင့်နှေးကွေးသော iphone 10 ရှိသော်လည်းယခုတွင်မူ ios 11 နှင့်အသေးစားအဆင့်မြှင့်မှုများကြောင့်၎င်းသည်သုံးစွဲရန်အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖုန်းဖြစ်လာသည်၊ လျှောက်လွှာများကိုဖွင့်ရန်နှောင့်နှေးမှုများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ချိတ်ဆက်မှုများ၊
ဒါကြောင့်ငါ့ကို milongas မပြောပါနဲ့။
ငါသည်သင်နှင့်တူပါသည်။ Hehehe ios9iphone နှင့် ipad တွင်ရှိသည်
ငါရေးသားခဲ့သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၌ပြောသကဲ့သို့, ဒီပြေးကဲ့သို့သောအခြေခံစံနှုန်းများအသုံးပြုသူ၏အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုကို simulate မပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိ terminal ၏တန်ခိုးအကဲဖြတ်ရန်စမ်းသပ်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များအရ Terminal ၏စွမ်းအားသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း firmware သည်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အဟောင်းဆိပ်ကမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
ကျွန်ုပ်အတွက်ဆိုးဝါးတဲ့အရာကတော့ iOS 10 ကိုသင်ပြန်ချင်ရင်တောင်ပြန်သွားလို့မရပါဘူး။ စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့သင်ဘက်ထရီနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားလျှင်၊ သင်မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ် Apple Stores တွင်ကိုယ်ပိုင်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားအရာတစ်ခုရှိပါကနောက်ဆုံးပေါ် iOS ကိုတပ်ဆင်ထားရမည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone6သည်ဤအချက်အလက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ၎င်းကို iOS 11 သို့မွမ်းမံပြီး၎င်းသည်နှေးကွေးသွားသည်။ ငါဘက်ထရီများအားလုံးကိုအားသွင်းပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်မိနစ် ၂၀ မှ ၂၅ မိနစ်ကြာသောမူလအားသွင်းစက်ဖြင့်အားသွင်းရန်ဆက်သွယ်သည်။ ဖွင့်ရုံမျှမကမွန်းတည့်ချိန် ၁၂၀၀ တွင် ၁၀၀% အားသွင်းမှုဖြင့်တစ်နေ့တာစတင်အသုံးမပြုဘဲကျွန်ုပ်တွင် ၄၅% အားသွင်းထားသည်။ အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်ဆင်တူသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်စာရင်းဇယားနှင့်မကိုက်ညီသည့်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သွားသည် ????
Pedro J ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ 6Gb iPhone 16 Plus ဟာ iOS 11 ကို update လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ iOS 10 တွင်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောရွေးချယ်မှုများမှာဒီဇိုင်း၊ အထူနှင့်စာလုံး၊ Weather ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများသည်သတင်းအချက်အလက်ပြတ်တောက်သွားခြင်း၊ ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်သောအခါအကူးအပြောင်းသည်အနည်းငယ်နှေးနှေးနေသည်၊ ဂဏန်းတွက်စက်အသစ်၏ဒီဇိုင်းကကျွန်ုပ်ကိုမယုံကြည်ပါ။ သတင်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်အား“ Driving” နှင့်“ Emergency SOS” mode နှင့် Settings ပုံစံပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုတစ်ခုဟုထင်ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်မှတ်ချက်၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Apple Watch ကို update လုပ်စဉ်တွင်ပြန်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါ။ သင် iPhone တစ်ခုချိတ်ဆက်လိုပါက၎င်းသည် iOS ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်ရှိရမည်။ iOS9ကို Jailbreak နဲ့ untethered လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ နာရီကိုမိုဘိုင်းနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်အောင် iOS 10 ကို update လုပ်ရပါတယ်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ Actualidad iPhone အတွက်သင့်ဆောင်းပါးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ iPhone 3G ကစပြီး (iOS ရဲ့နောက်ဆုံး update မှာ "fried" ခံခဲ့ရတာပါ။ )
Pedro J ကိုပြန်ပြောပါ
ငါထင်တာတော့မင်းကိုမင်းတို့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့မလှည့်စားဘူး၊ ငါရှိတာက iPhone6ဟာမဆိုးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ios 11 နဲ့နှေးနေတယ်၊ ​​appstore၊ keyboard မှာ၊ ဇာတိသူတွေကို၌တည်၏
၁) iOS 1 ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာတပ်ဆင်ခဲ့သလဲ။ indexing လုပ်ခြင်း၊ convert လုပ်ခြင်းနှင့်နောက်ကွယ်တွင်ပြုလုပ်သောအရာများသည်ဖုန်းကိုအစတွင်နှောင့်နှေးစေသည့်အပြင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကုန်ဆုံးစေရန်ရက်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူသည်ကိစ္စရပ်များကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပြီးအရာခပ်သိမ်းသည်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်။
၂) ios2 ကို scratch မှ install လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသလား။ iOS 11 ရဲ့ beta ဗားရှင်းကို install လုပ်တဲ့အခါမှာပြproblemsနာတွေကြုံခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံး version ကထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဆိုးသွားပါတယ်။ ငါခြစ်ရာကနေပွနျလညျထူထောငျနှင့်အရာခပ်သိမ်းစိတ်ပျက်စရာစတင်ခဲ့သည်။ ios10 နဲ့အတူတူပါပဲ။ ခြစ်ရာမှနှင့်အရံသိမ်းဆည်းကိုပြန်မယူဘဲပင်။ အရာအားလုံးသန့်ရှင်း
Davis က ဟုသူကပြောသည်
ငါ OS 11 နှင့်တစ်ပါတ်အကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးဘက်ထရီတိုးတက်မှုသတိမထားမိသောကြောင့် IOS 10.3.3 သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် IOS ဗားရှင်း (၉ မှ ၁၀ မှ ၁၀ အထိသို့ ၁၀ သို့ပြောင်းသည်စသည်) ကိုအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ... ) ကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်းသောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် iPhone အသစ်တစ်လုံးကဲ့သို့လုပ်ခြင်းသည်မြည်းနှင့်တူ၏။
iPhone6နဲ့ 6S ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုဘယ်လောက်စော်ကားတယ်။
ယခုဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းသည် iPhone အသစ်ကို ၀ ယ်ယူရန် iPhone ထက်ပိုနှေးသည်ဟုယုံကြည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှည့်စားနေသည်။
iOS6ပါရှိသည့် iPhone 11 ပေါ်တွင် application တစ်ခုကိုရရှိနိုင်ရန် (loaded လုပ်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အဆင်သင့်) အတွက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ iOS10 နဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
အိမ်တွင် iPhone6နှင့် iPhone6Plus ရှိသည်။ ဖုန်းနှစ်လုံးသည် update မတိုင်မီတွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ သက်သေသာဓကအနေဖြင့် Apple သည်အခြားသူများအတွက်စီစဉ်ထားသောခေတ်မမီတော့သောအရာမရှိဟုဆိုနိုင်သော်လည်းဖြစ်ရပ်မှန်များသည်မမှန်ပါ ။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်မင်းနှင့်သဘောမတူပါ၊ ထောင်ချီသောတိုင်ကြားမှုများရှိနေပြီးတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
ငါတို့ပြုံးသောအခါကင်မရာ + အသစ်ပြောင်းသည်
Apple က iPhone 10.3.3s နဲ့ iOS6ကိုအဆင့်လျှော့ချခွင့်ပြုလိုက်တယ်